Yakanakisa Urolithin A & B poda Mugadziri fekitori
Cofttek vane hunyanzvi hwekugadzira huwandu uye kupa Urolithin A hupfu; Urolithin B hupfu; 8-O-Methylurolithin A poda pasi pemamiriro e cGMP. Uye nehuwandu hwekugadzira hwepamwedzi hwe820KG.
Tenga Urolithin poda
COA yeUrolithin A poda
COA yeUrolithin B poda
COA ye8-O-Methylurolithin A powder
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Urolithin A & B Powder, saka iyi ndiyo gwara raunoda; ita chokwadi chekuti unoverenga ese makumi maviri nemana FAQs.
> Chii chinonzi Urolithins?
> Anozivikanwa Mamolekyulu eUrolithin
> Urolithins Inoshanda Sei?
> Benefits yeUrolithins
> Dosage yeUrolithins
> Zvokudya Zvokudya zveUrolithins
> Nei Uchifanira Kutenga Kubva Kufekitari Yedu Yekugadzira?
> Chii chinonzi Urolithin A?
> Urolithin inoshanda sei?
> Ndezvipi michero ine Urolithin A?
> Urolithin inoshandiswa nei?
> Urolithin yakanakira chii?
> Ndezvipi zvekudya zvine Urolithin A?
> Ndezvipi zvinobatsira zveUrolithin A?
> Tinowana sei Urolithin A kubva mukudya kwedu?
> Chii chinonzi Mitopure?
> Mitopure haina njodzi kudyiwa nevanhu here?
> Ndinofanira kutora Mitopure rinhi?
> Chii chinonzi Urolithin chekuwedzera?
> Urolithin A supplement inobatsira
> Chii chinonzi Urolithin B?
Chii chinonzi Urolithins?
Urolithin zvigadzirwa kana mametabolite eellagic acid zvikamu senge ellagitannins. Izvi zvemakemikari zvinogadzirwa kubva kune ellagic acid-zvigadzirwa kubva mudumbu microbiota.
Sezvo maruva emukati akakosha pakugadzira urolithin, huwandu hwerolithin inogadzirwa mumuviri zvinoenderana nerudzi rwezvinhu zviri mumaruva, chinhu chakakosha kwazvo cheboka reClostridium leptum. Zvinonzi vanhu vane microbiota vakapfuma munhengo dzeboka iri vanogadzira huwandu hwakanyanya kwazvo hwemaurolithin kupfuura avo vane mamwe maruva maruva akadai seBacteroides kana Prevotella.
Urolithin inogadzirwawo kubva punicalagin mumatumbu, chaizvo sema ellagitannins, uye ndokuzoburitswa mumugini. Kuti utarise kugadzirwa kweurolithin mumuviri, zviyero zvavo zvinofanirwa kuongororwa mumuti weti yemunhu akambodya zvekudya zvakapfuma muellagic acid kana zvinowedzerana neurolithin sechinhu chavo chikuru. Urolithin, kamwe chete mu plasma, inogona kuwanikwa muchimiro cheglucuronides.
Urolithin anowanzo kuwanikwa muzvikafu zvinoverengeka, kunyangwe asiri mamorekuru ese eurolithin anogona kutorwa kubva kuchikafu. Kamwe kana chikafu chakapfuma muellagic acid chadyiwa, zvinoenderana nemumatumbo flora kuputsa ellagitannins uye punicalagin kuenda kumberi mukati metabolite uye zvigadzirwa zvekupedzisira; mamolekemu eurolithin.
Aya mamorekuru apfuura achangowana mukurumbira uye achiramba achikwira se superfood zvinowedzera nekuda kwavo anti-bundu, anti-kukwegura, anti-kupisa, uye autophagy-inducing mabhenefiti. Zvakare, chaiwo mamololekemu anofambidzana pamwe nekuvandudzwa kwesimba mazinga sezvo iwo ane simba rakakura pane mitochondrial hutano. Kugadzirwa kwesimba mumuviri inzira inoitika mumitochondria, uye kugadzirisa mashandiro eichi organelle ndeimwe yemabasa mazhinji eUrolithins.
Anozivikanwa mamorekuru eUrolithin
Urolithins inoreva pamwe chete kumamorekuru akasiyana ayo ari emhuri yeurolithin asi ane akasiyana makemikari mafomula, mazita eIUPAC, makemikari zvimiro, uye masosi. Zvakare, aya mamorekuru ane kushandiswa kwakasiyana siyana uye mabhenefiti pamuviri wemunhu uye nekudaro anoshambadzwa zvakasiyana mufomu yekuwedzera.
Urolithins, mushure mekutsvakurudza kwakawanda, inozivikanwa kuparara kuita mamorekuru anotevera mumuviri, kunyange zvazvo zvisinganyanyozivikanwa pamusoro pemamorekuru ese chaiwo: ●Urolithin A (3,8-Dihydroxy Urolithin)
Urolithin A uye Urolithin B, inowanzozivikanwa seUroA uye UroB zvichiteerana, ndiwo anozivikanwa mametabolite eUrolithins mumuviri. Aya maviri zvakare ari mamorekuru ayo arikushandiswa izvozvi mune zvinowedzerana uye neupfu hwekutsiva mapoda.
Kamwe muropa, Urolithin A inowanikwa seUrolithin A glucuronide, uye Urolithin B inogona kuonekwa seUrolithin B glucuronide. Nekuda kweizvi, zvinofungidzirwa kuti vane mhedzisiro yakafanana neyevatangiri vavo senge muzvidzidzo zve vivo zvave zvisingaite nemaurolithin. Kushaikwa kwezvidzidzo zvevivo kunoita kuti zviome kuongorora kana iyo UroA uye UroB glucuronides iine chero mhedzisiro yakasiyana neUroA neUroB pachavo.
Urolithin A ine chimwe chigadzirwa chinowanikwa muropa, chinonzi Urolithin A sulfate. Zvese izvi zvigadzirwa zvinoitisa mabasa avo muropa uye zvinobva zvadzimwa kubva muchirongwa kuburikidza neweti.
Urolithin D ndiyo imwe molecule yakakosha inogadzirwa nemhedzisiro yegut microbiota, zvisinei, hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve mhedzisiro uye zvinogona kushandiswa. Parizvino, haisi kushandiswa mune chero yekuwedzera kana kudya kunotsiva, kusiyana nemamwe ayo, UroA uye UroB. Uyezve, zvekudya zveUrolithin D hazvizivikanwe
Urolithin A Powder Ruzivo Pasuru
Urolithin A haiwanikwe zvakasikwa kubva kunowanikwa zvekudya uye ndeyeboka remakemikari anozivikanwa se benzo-coumarins kana dibenzo-α-pyrones. Iyo iri chaiyo inogadziriswa kubva kune ellagitannins kuenda kuUrolithin A 8-Methyl Ether isati yawedzera kuputswa muUrolithin A. Ichi chigadzirwa chekupedzisira chinowanikwa muhuwandu mufekitori yedu yekugadzira muchimiro cheUrolithin A powder. MethylUrolithin A poda inowanikwawo kutenga muhuwandu kana zvichidikanwa.
Urolithin A haiwanike mumatanho mamwe chete, kunyangwe nematanho akafanana ekushandisa ayo anotangira, mune vanhu vakasiyana nekuti zvese zvinoenderana nebasa re gut microbiota. Urolithin A's metabolism inofungidzirwa kuti inoda Gordonibacter urolithinfaciens naGordonibacter pamelaeae asi vamwe vanhu vane izvi vachiri kuratidza kushoma pasina zvazvinoita pakugadzirwa kwemamorekuru.
Urolithin A ine chaiwo maficha anoita kuti zvionekwe kubva kune zvimwe zvinhu, senge zvataurwa mune tafura pazasi.
3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) pyran-6-imwe; 3,8-DIHYDRO DIBENZO- (B, D) PYRAN-6-ONE; 3, 8-Dihydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-imwe; Castoreum pigment ini; Urolithin A; 6H-Dibenzo (B, D) pyran-6-imwe, 3,8-dihydroxy-; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzopyran-6-imwe); urolithin-A (UA; 3,8-dihydroxy-6H-dibenzo (b, d) pyran-6-imwe
Chiedza Yero poda
Soluble muDMSO (3 mg / mL).
Mazuva kusvika Mavhiki: Mukamuri ine rima, yakaoma pa0 - 4 degrees C Mwedzi kusvika Kumakore: Mufiriji, kure nezvinwiwa pa -20 madigiri C.
Kudya kunoshandiswa sekutsiva kwekudya uye zvinowedzera
Urolithin B Powder Ruzivo Package
Urolithin B is phenolic compound iyo yakatanga kungoitwa yakawanda-kubva muna Ndira wegore ra2021. Inogona kuwanikwa nekudya chikafu chakati wandei ari masosi ezve ellagitannins anogona kugadziriswa muUrolithin B. Yakawanikwa iine simba anti-kuchembera mukomboni iwe yaunogona kutenga muhuwandu muchimiro cheUrolithin B poda.
Izvo zvakasiyana zvivakwa zveUrolithin B poda inowanikwa kukambani yedu yekugadzira zvataurwa pazasi:
AURORA 226; Urolithin B; AKOS BBS-00008028; 3-hydroxy urolithin; 3-hydroxy-6-benzo [c] chromenone; 3-hydroxybenzo [c] chromen-6-imwe; 3-Hydroxy-benzo [c] chromen-6-imwe; 3-HYDROXY-6H-DIBENZO [B, D] PYRAN-6-ONE; 6H-Dibenzo (b, d) pyran-6-imwe, 3-hydroxy-; 3-Hydroxy-6H-benzo [c] chromen-6-imwe AldrichCPR
Chiyero chine brown brown
Soluble pa5mg / mL painodziirwa, yakajeka mvura
Anti-oxidant uye Pro-oxidant yekuwedzera ine estrogenic chiitiko.
Kunze kweaya makuru mamorekuru eUrolithins ayo anoumbwa semhedzisiro yezviito zvemumatumbo, pane mamorekuru akati wandei ari epakati akaumbwa panguva yekuparara kwevakatangira. Aya mapakati anosanganisira:
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezve ava vepakati sezvazvino, zvisinei, kumwe kutsvagurudza kune mukana wekuwana mabhenefiti uye mashandisiro emaUrolithin mamorekuru.
MaUrolithins Anoshanda Sei?
Urolithin, semamwe makomputa anoshandiswa mukuwedzera, anokanganisa nhengo dzakasiyana uye masisitimu mumuviri, kuti agadzire zvinobatsira. Iyo mashandiro ekuita kweUrolithins, ese A uye B, anogona kuganhurwa mumatanhatu makuru matavi, uye rimwe nerimwe bazi rine mukana wekuburitsa akawanda mabhenefiti.
Kubatsira kukuru kwekuve ne antioxidant zvivakwa kunoderedzwa kunetseka kweiyo oxidative mumuviri. Kushushikana nekushushikana kunoreva kushushikana pamasero uye zvinyama mumuviri nekuda kwekushanduka kwemakemikari ayo anogadzira makemikari asina kugadzikana, anozivikanwawo semahara radicals. Aya mahara radicals ane zvimwe zvinokwanisa kutora chikamu mukuchinja kwemakemikari mumuviri, izvo zvigadzirwa zvinokuvadza maseru nematukisi.
Urolithins anodzvinyirira iyi oxidative kusagadzikana, izvo zvinoguma nekudzivirira kwekukuvara kwesero uye kunowedzera mikana yekupona kwesero. Iyi mhedzisiro inogoneswa kuburikidza nekudzikiswa kwekugadzirwa kweiyo intracellular Reactive Oxygen Mhando (iROS), iri mhando yemahara radicals. Zvakare, antioxidant zvivakwa zveUrolithin A uye Urolithin B zvakare zvinomuka kuburikidza nekuderedzwa kweNADPH oxidase subunit expression, iyo yakakosha pakuchinja kwemakemikari kunoguma nekushushikana kweiyo oxidative.
Kugadzira antioxidant zvivakwa, Urolithins zvakare inowedzera kutaura kwe antioxidant heme oxygenase-1 kuburikidza neNrf2 / NDI inoratidza nzira. Izvi zvinovabatsira kwete chete kudzikisa makomputa anokuvadza asiwo kuwedzera maenzymes akanaka ayo anokurudzira antioxidant zvivakwa.
Urolithins, painopihwa makonzo ane LPS-inokanganisa huropi kukuvara, inhibited microglial activation, kana nemazwi akareruka, vanga uye kuzvimba kuumbika izvo zvinowedzera mukana wekusingaperi uropi kukuvara. Iyi mhedzisiro yeurolithins inofungidzirwa kuve musanganiswa weiyo antioxidant zvivakwa uye zvinopesana-nekuzvimba zvivakwa.
● Zvivakwa zveAnti Inozvimba
Iwo anti-anogumbura zvivakwa zveUrolithins ndeimwe yezvikonzero zvikonzero zvekukwira kwayo mukurumbira mune yekuwedzera nyika. Iyo michina kuburikidza neaya macompound, kunyanya Urolithin A, Urolithin B, uye yavo yeglucuronides fomu, zvakasiyana zvakasiyana uye zvinogadzira zvakaenzana zvakasiyana mhedzisiro.
Iyo inorwisa-kuzvimba mhedzisiro yeUrolithin A uye Urolithin B ine maitiro akafanana seAsi-Steroidal Anti-anogumbura Mishonga kana maNSAID akadai saIbuprofen neAspirin. Urolithins anozivikanwa kuve neanodzivirira mhedzisiro mukugadzirwa kwePGE2 uye kutaura kweCOX-2. Sezvo maNSAID anodzivisa kutaura kweese ari maviri COX 1 uye COX 2, zvinogona kugumiswa kuti maUrolithin ane yakasarudzika inorwisa-kupisa simba.
Iwo anti-anogumbura zvivakwa zveUrolithins zvakave zvichiratidzwa kuti kwete kwete chete kurwisa kuzvimba mumuviri asi zvakare zvinokwanisa kudzoreredza kukuvara kwakaitwa kune nhengo semhedzisiro yekuzvimba kwenguva refu uko kwakakonzera kukundikana kwemuviri. Mune ongororo ichangoburwa yakaitwa pamhando dzemhuka, zvakaonekwa kuti urolithin yekushandisa yaive nekwaniso yekudzora zvinodhaka-zvinokonzerwa nephrotoxicity nekudzivirira renal cell kufa uye kuzvimba.
Izvo zvakawanikwa kuti urolithin A poda, yakapihwa nemuromo, yaive neidziviriro panzira yekuzvimba pamwe neiyo proapoptotic cascade, nekudaro, kuchengetedza renal basa. Izvi zvimiro zveUrolithin A pamwe chete nemamwe maurolithin anonongedzera kune ramangwana apo makomponi aya anogona kushandiswa semushonga pamwe nekushandisa kwavo kwazvino sekuwedzera.
Urolithins vanofungidzirwa kuve anti-carcinogenic nekuda kwekugona kwavo kuve nemhedzisiro senge kutenderera kwesero, aromatase inhibition, induction yeapoptosis, kudzvinyirira bundu, kusimudzira kuzvitutumadza, uye senescence, transcriptional murau we oncogenes, uye kukura kwechinhu receptors. Iyi mhedzisiro, kana isipo, inogona kukonzera kukura kwekuwedzera kwemasero ekenza. Zviratidzo zvekudzivirira zveUrolithins zvakaratidzirwa, kunyanya kune gomarara reprostate uye gomarara rekoloni, nevatsvagiri vazhinji vachitsvaga kushandisa maUrolithin semushonga unodzivirira wekenza yeprostate.
Chidzidzo chakaitwa muna2018 chakadzidza mhedzisiro yeUrolithin panzira yemTOR nechinangwa chekutsvaga nzira yekurapa kenza yepancreatic. Kenza yepancreatic inosanganisirwa nehuwandu hwekufa, asi ongororo ichangobva kuitwa inoratidza kuti Urolithin inogona kungoita kwete kuwedzera mwero wekupona chete uye zvakare kutadzisa kubatanidzwa kwemarara maseru kune mamwe mativi emuviri, zvichikonzera metastasis. Urolithin A yakadzidzwa zvakanangwa uye mhedzisiro yacho yakaenzaniswa nezvibodzwa zvakagadzirwa neyakajairwa kurapwa regimen. Izvo zvakagumiswa kuti Urolithin A yakaburitsa mhedzisiro zvirinani painoshandiswa kugadzirisa kenza yepancreatic, mune ese mamiriro ezvinhu; painoshandiswa yega kana neyakajairika kurapwa chirongwa.
Nekumwe kuongorora, Urothilins mabhenefiti anogona kunge aine kurapwa kwekenza yepancreatic zvakare.
MaUrolithin anozivikanwa nekuda kweanorwisa mabhakitiriya uye ane mhedzisiro nekudzivirira nzira dzekutaurirana dzehutachiona, asingavabvumidze kufamba kana kutapudza masero. Ivo zvakare vanotenda kuti vane antifungal zvivakwa, kunyangwe iyo chaiyo mashandiro haasati ajeka.
Pane zvipembenene zviviri zvinonzi Urolithins zvine simba rakanyanya rekudzivirira, zvichikonzera kuchengetedzwa kwemuviri wemunhu. Utachiona uhwu hutachiona hwemarariya uye Yersinia enterocolitica, zvese izvi zvichikonzera hutachiona hwakanyanya muvanhu. Iyo mashandiro ayo Urolithin ane antibacterial zvimiro zvisinei neiyo muviri zvakafanana.
● Anti Estrogenic uye Estrogenic Properties
Estrogen ihormone yakakosha mumuviri wechikadzi, uye kuderera kwematanho ayo kwakabatana nezviratidzo sekukweshera, kupisa kupisa, uye kuderera kwemafupa. Tichifunga nezve kukosha kwehomoni, zvine musoro kuti chinotsiva chiri kutsvagwa zvakanyanya. Nekudaro, mahormone exogen ane zvimwe zvinokanganisa zvinoita kuti mashandisiro avo ave asingadiwe.
Nekudaro, Urolithin A uye Urolithin B vane mamiriro akafanana seinogumira estrogen uye hukama hweeestrogen receptors mumuviri. Urolithin A ine hukama hwakasimba, kunyanya kune iyo alpha receptor ichienzaniswa neye beta receptor. Kunyangwe ese ari maviri makemikari ane maitiro akafanana neestrogen, urolithins ane ese esrogenic uye anti-estrogenic zvivakwa, kusiyana neinogumira estrogen.
Hupfumi hweiyi mhedzisiro yeUrolithins unovaita mukana wekurapa sarudzo yemamwe matambudziko anomuka apo exogenous estrogen inopihwa kurapa zviratidzo zvekushomeka kwesrogen.
● Mapuroteni Glycation Inhibition
Mapuroteni glycation inzira inosungirwa mamorekuru eshuga kune protein. Maitiro aya anoonekwa panguva yekukwegura kana sechikamu chemamwe matambudziko. Urolithins inodzivisa kuwedzerwa kweshuga, nekudaro inokonzeresa anti-glycation mhedzisiro. Zvakare, ivo vanodzivisa epamberi glycation endproducts kuumbwa, iko kuunganidza kuri kwakakosha pathophysiological nhanho mukukura kwechirwere cheshuga.
Urolithin ane nzira dzakasiyana dzekuita kuburitsa akasiyana mabhenefiti ekudzivirira mumuviri wemunhu. Urolithin A poda uye Urolithin B poda inobatsira kugadzira izvo zvinowedzera zvinozivikanwa nekuda kwemabhenefiti ezvigadzirwa zvikuru. Yese mabhenefiti emakemikari makomponi anotsigirwa neuchapupu hwesainzi, uye kunyangwe kumwe kutsvagisa kuri kuitwa kutsigira kuwedzerwa kweUrolithins mumirayiridzo yekurapa kusagadzikana kwakawanda.
Izvo zvakanakira izvi zvinosanganiswa, zvichibva pamaitiro ataurwa pamusoro, anosanganisira:
Urolithin anotorwa kubva kune akati wandei ellagitannins-zvakapfuma zvekudya izvo pachazvo zvinozivikanwa kuva zvakapfuma muma antioxidants. Chikafu chinowanzojairika kune ellagitannins uye ellagic acid mapomegranati, uye iwowo ndiwo manyuko makuru e antioxidants. Nekudaro, zvakakosha kusiyanisa kana antioxidant zvivakwa zvekudya uye urolithin zvakafanana kana kana imwe iine kugona kwakanyanya kupfuura imwe.
Pakutanga zvidzidzo zveUrolithin A uye Urolithin B zvakaratidza kuti antioxidant mhedzisiro yeiyi yaive makumi mana neshanu pazasi peiyo yemichero pachayo, nekudaro zvichireva kuti aya makemikari makemikari aisazogadzira zvigadzirwa zvakanaka zvekuwedzera.
Nekudaro, ongororo dzichangobva kuitwa neimwe nzira yekuongorora inoratidza kuti Urolithin A uye B zvese zviri zviviri zvine hunyanzvi uye zvine simba antioxidant zvimiro zvinorwisa mhedzisiro yekushushikana nekushushikana. Kana iyo nzira imwechete yekuongorora yakashandiswa kuongorora ese maurolini kuona kuti ndeipi inonyanya kuita, Urolithin A yakamira. Mhedzisiro yacho yakazoburitswazve muchidzidzo chakafanana naUrolithin A achitungamira mune simba, zvakare.
Muchokwadi, chimwe chezvidzidzo chakanangana nekuongorora antioxidant zvimiro zvemakemikari makomponi nekuyedza kugona kwavo kurwisa oxidative kusagadzikana. Nechinangwa chechidzidzo ichi, vaongorori vakaita kuti kushushikana mumasero e-neuronal uye kana vaoneswa maUrolithins, kunyanya Urolithin B, vakaona kuderera kwakanyanya kwekushushikana pamwe nekuwedzera kupona kwemasero e-neuronal.
Iwo anti-anogumbura zvivakwa zveUrolithins zvinogadzira akati wandei mabhenefiti, ese ayo akave anoratidzwa nesainzi.
Mushonga wekugadzira marariya unoshandiswa zvakanyanya mune dzimwe nzvimbo dzekumaruwa unosanganisira kushandiswa kwePomegranate. Vatsvagiri vakaedza kunzwisisa kunaka kwemushonga uyu pakurapwa kwemalaria nekubatanidza mhedzisiro yacho nemhedzisiro yeUrolithins inogadziriswa mumatumbu kubva padamba.
Chidzidzo chakaitwa kuti chiongorore zvinoitwa neUrolithin pakurapa malaria nekufumura masero ane hutachiona monogytic kuUrolithins. Ichi chidzidzo chakawana kuti makemikari makemikari anodzivisa kuburitswa kweMMP-9, inova yakakosha metalloproteinase mukusimudzira uye pathogenesis yemarariya. Kuvhiringidzwa kwekomboni kunodzivirira malaria kubva pakuve pathogenic mumuviri, ndosaka ichitendwa kuti ine antimalarial athari.
Mhedzisiro yeongororo yakaratidzawo kuti Urolithins yaitadzisa mRNA kutaura kwehutachiona hwehutachiona, zvichikonzeresa kuvharidzira kugona kwehutachiona. Mhedzisiro yenyaya iyi inoratidza kuti zvinobatsira zvemushonga wekugadzira kusanganisira mutamba unokonzerwa nemhedzisiro yeurolithin.
2.Mhedzisiro paEndothelial Masero
Atherosclerosis chinhu chakajairika chinotungamira kukutuka kwemoyo uye myocardial infarctions. Izvo zviviri zvakajairika zvinhu kumashure kweatherosclerosis kukura ndeye endothelial kusagadzikana uye kuzvimba. Zvidzidzo zvenguva pfupi zvakayedza kuratidza kuti izvo zvinopesana nezvirwere zveUrolithin zvinogona kudzivirira endothelial kusagadzikana, uye nekudaro, kugadzirisa atherosclerosis kuumbwa uye kusimudzira.
Urolithin A yakawanikwa nevatsvagiri kuti ive neanopokana-nekurwisa chiito pakati peyese urolithin. Imwe ongororo ichangoburwa yakanangana nema cell endothelial maseru akaverengerwa neODI yakasanganiswa, chinodikanwa chekuumba atherosclerosis, uye akasiyana masisitimu eUrolithin A. Vatsvagiridzi vakaona kuti Urolithin A yakavhara nitric oxide synthase uye yakadzora kutaura kweI-CAM, izvo zvakakonzera kuderedzwa kuzvimba uye kuderera kugona kwemasero, kunyanya monocytes kutevedzera kune endothelial maseru, zvichiteerana. Kuderedza monocytic kuomerera kunoderedza endothelial kusagadzikana.
Uyezve, Urolithin A yakawanikwa ichideredza kutaura kwe tumor necrosis factor α, interleukin 6, uye endothelin 1; ese pro-anogumbura cytokines.
3.Mhedzisiro pane Fibroblasts muColon
Colon inoratidzirwa kune exogenous pathogens uye zvekudya zvinoriumba izvo zvinoita kuti ive panjodzi yekuzvimba, iyo mukufamba kwenguva inogona kutungamira kune akati wandei nyaya dzehutano. Sezvo Urolithin A uye Urolithin B zvichiburitswa nemumatumbo maruva, zvakakosha kuti uzive mhedzisiro yavo munzvimbo yekutanga mumuviri wavakaumbwa.
Kuti uongorore mhedzisiro yeUrolithins pane colon maseru uye fibroblasts, vaongorori vakaita kuyedza uko fibroblast yakafumurwa kune pro-inflammatory cytokines uyezve kuUrolithins. Sezvambotaurwa pamusoro apa, zvakawanikwa kuti Urolithins inhibits monocyte adhesion uye fibroblast migration yekudzivirira kuzvimba mukoloni.
Zvakare, zvakawanikwa kuti Urolithins yaitadzisa kushanda kweNF-κB factor, iyo yakakosha mukugadzirisa kwekuputika. Muchokwadi, vatsvagiri vanofunga kuti ichi ndicho chinhu chikuru chakakonzera anti-kupisa zvimiro zveurolithin.
Urolithins inosanganisirwa neanopesana nekenza zvivakwa, uye mashandiro ezvinhu izvi zvataurwa pamusoro. Nekudaro, zvakanakira izvi zvivakwa zvinotaurwa pazasi:
1. Kudzivirirwa kubva kuProstate Cancer
Kuonekwa kweUrolithins mumuviri kunowanzoitwa kungave kushandisa iropa kana weti; zvisinei, ivo vanogona kuwanikwa mune ese ari maviri colon yevanhurume nevakadzi uye iyo prostate gland yevarume.
Nekuda kwekutsvaga uku, vaongorori vakaedza kuongorora kana mabhenefiti emakemikari makemikari ari kuoneka muprostate gland senge vari mukoloni. Nekudaro, chidzidzo chakagadzirwa, mhedzisiro yacho inoratidza kuti maUrolithin ane chinodzivirira pane iyo gland yeprostate.
Yakawanikwa kuti Urolithin A uye Urolithin B, pamwe naUrolithin C uye Urolithin D yakavhiringidza iyo CYP1B1 enzyme muprostate gland. Iyi enzyme ndiyo inotarisirwa chemotherapy uye yaive yakadzvinyirirwa zvakanyanya neUrolithin A, ichienzaniswa nemamwe maurolithin. Vakatadzisawo CYP1A1, zvisinei, kuwanda kweiyo urolithin kwaidikanwa kuti ibudise iwo maitiro.
Chimwe chidzidzo chakaitwa kuongorora prostate inodzivirira mhedzisiro yeUrolithins. Zvakawanikwa kuti Urolithin A yaive nemushonga unorwisa gomarara pagomarara reprostate kuburikidza zvese zviri zviviri, p53 inoenderana uye p53 yakazvimirira nzira.
2.Topoisomerase 2 uye CK 2 inhibition
Urolithins ane anti-kenza zvivakwa kuburikidza nekudzivirira kwenzira dzinoverengeka dzemamorekuru izvo zvinonanga zvakananga kana zvisina kunangana mukukanganiswa kwekenza kukura. Iyo enzyme yeCK2 inzira yakakosha iyo inobatanidzwa munzira dzakadai dzemamorekuru, nebasa rayo guru riri rekusimudzira kuzvimba nekenza.
Urolithins anodzivisa nzira dzakasiyana kuti asvike kune inowanikwa enzyme, CK2 yekupedzisira inodzivirira maitiro ayo, senge yayo kenza-inosimudzira zvivakwa. Urolithin A yakaratidzirwa kuve ine simba CK2 inhibitor, mu silico.
Saizvozvo, Topoisomerase 2 inhibition inotendwa kuti ine anti-cancer mhedzisiro. Muchokwadi, iyi mashandiro inoshandiswa nemamwe machemotherapy agents akadai seDoxorubicin. Mune ongororo ichangoburwa, zvakawanikwa kuti Urolithin A ine simba kudarika Doxorubicin mukudzivirira Topoisomerase 2, nekudaro, ichidaidzira kuti iwedzerwe kune yazvino nhungamiro yekurapa mamwe kanzira.
Mishonga inorwisa mabhakitiriya yeUrolithins inoenderana neQuorum Sensing Inhibition iyo inobvisa kugona kweiyo microorganism kutaurirana, kufamba, uye kuumba hutachiona zvinhu. Iyo yakakosha mashandiro ekupona kwebhakitiriya, uye kuvharirwa kwayo neUrolithins kunouraya kune microorganism.
Iyo huru inorwisa mabhakitiriya yeUrolithin kugona kwayo kuchengetedza ura kubva pakukura kweYersinia enterocolitica. Muchokwadi, Urolithins inosanganisirwa nekuchinjika kweiyo maruva maruva, iwo iwo maruva ayo anoitisa kugadzirwa kwavo munzvimbo yekutanga. Izvi zvinonyanya kukosha sezvo chete zvakasarudzika zvipenyu mumaruva zvinogona kuwedzera kugadzirwa kweUrolithins.
Urolithins anosunga kune eestrogen receptors uye anogadzira zvese, estrogenic uye anti-estrogenic zvivakwa. Izvi zvinoita kuti rive mukwikwidzi mukuru weSelection Estrogen Receptor Modulators kana maSERM, iwo mashandiro makuru ekuva nemhedzisiro mune imwe nzvimbo yemuviri uye chinodzivirira kune imwe nzvimbo yemuviri.
Mune imwe yeongororo dzakaitwa pamhedzisiro yeurolithin pane estrogen receptors, zvakawanikwa kuti ivo, kunyanya urolithin A, inhibit the gene expression of ER-positive endometrial cancer cells, zvichikonzera kudzvinyirira cancer endometrial. Endometrial hypertrophy inowanzoitika mhedzisiro yeexogenous estrogen mune post neoplasia sevakadzi vanotora mahormone kutsiva kurapwa, uye kushandiswa kweurolithins kunofungidzirwa kuve kunodzivirira pane endometrium. Nekudaro, kumwe kutsvagurudza kunofanirwa kuitiswa Urolithins asati agona anotevera SERM mishonga.
Iko kuvapo kweakakwira glycation magumo zvigadzirwa chiratidzo chehyperglycemia iyo inotungamira vanhu kune chirwere cheshuga-chinosanganisirwa kukuvara kwemoyo kana kunyange chirwere cheAlzheimer. Urolithin A uye Urolithin B vakaratidzirwa kuve neanorwisa-glycation mhedzisiro inodzivirira kutukwa kwemoyo uye inoderedza njodzi yemaurodegeneration zvakanyanya.
Nekudaro, iyo inhibition yeprotein glycation neUrolithins inofungidzirwa kuve iine zvese cardioprotective uye neuroprotective mhedzisiro.
Zvakanakira Urolithin A zvakanyatsotaurwa pazasi:
● Wedzera upenyu hurefu
Kukwegura, kushushikana, uye kumwe kusagadzikana kunogona kukuvadza iyo mitochondria, iyo yakakosha mukugadzirwa kwesimba kwesimba uye kushandiswa mumuviri. Zvakare, mitochondria inowanzo kunzi se 'simba reimba yesero', zvinoreva kukosha kwayo kweyakajairika kushanda kwesero. Nekudaro, chero kukuvara kune ino simba simba kunogona kukanganisa sero uye kudzikisira hupenyu hwayo zvakanyanya.
Urolithins inokonzeresa chaicho chiitiko chinozivikanwa se mitophagy iyo inobvumidza muviri kubvisa mitochondria yakakuvara, zvisinei nechikonzero chekukuvara, uye kuwedzera nguva yeupenyu. Zvichienderana nehukuru hwekukuvara, mitochondria inogona kushandiswazve kune mishonga uye kugadzirwa kwesimba.
Sezvambotaurwa pamusoro apa, urolithin ane anti-anogumbura zvivakwa uye izvi zvinhu zvinokurudzira neuronal maseru kuumbwa muuropi, iyo ine mhedzisiro yakanaka pakucherechedzwa nekuchengetedza ndangariro. Uyezve, Urolithin A inodzivirira kubva kuurodegeneration inoonekwa nechirwere cheAlzheimer, saka, iyo neuroprotective mhedzisiro.
● Kudzivirira Gomarara reProstate
Urolithin A ine anti-cancer zvivakwa asi zvinonyanya kuoneka mune yekenza yeprostate, ine ongororo dzinoverengeka dzichisimudzira kushandiswa kwedamba uye mamwe manyuko eUrolithins ekurapa gomarara reProstate.
● Tora Kufutisa
Urolithin A ine anti-kufutisa mhedzisiro sezvo isingotadzise chete kuunganidzwa kwemafuta maseru mumuviri asiwo inodzivirira mamaki anokonzera adipogenesis. Mune ongororo yakaitwa pamhando dzemhuka, zvakaonekwa kuti Urolithin A ine simba rekukwiridzira paT3 thyroid hormone, iyo inokonzeresa kuwedzerwa kwesimba kwesimba mumakonzo. Izvi zvinokonzeresa thermogenesis uye inokonzeresa mafuta ebrown kuti anyungudike, nepo machena mafuta achiiswa mukuita browning.
Muchidzidzo chimwe chete, zvakawanikwa kuti URolithin A ine nzira yekudzivirira pane kufutisa kunyangwe mumakonzo akadyiswa kudya kwakakora-mafuta. Izvi zvinoratidza kuvimbisa kukuru sekushushikana uye vatsvagiri vakadaidzira kunyorera kwevanhu kwezviwanikwa izvi kuti vakwanise kushandisa chinoumba ichi kurwisa denda rekufutisa.
Iwo mabhenefiti eUrolithin B ndeaya pazasi:
● Dzivirira kurasikirwa kwetsandanyama
Urolithin B inogovera mamwe emabhenefiti eUrolithin A asi iine bhenefiti chaiyo, yakasarudzika yega pachayo. Urolithin B inozivikanwa kudzivirira mhasuru kurasikirwa mune zvese zvepanyama uye zvehutano. Uyezve, inosimudzira skeletal mhasuru kukura nekuwedzera mapuroteni synthesis mumhasuru.
Iyo zvakare ine yekudzivirira mhedzisiro pane mhasuru atrophy sezvinoonekwa mune ongororo yakaitwa pane mbeva dzainge dzakatsemuka tsinga yadzo. Izvi zvaigona kunge zvakakonzera mhasuru atrophy asi mbeva dzakaisirwa mapombi e mini osmotic ayo akaramba achivapa Urolithin B. Zvakaonekwa kuti mbeva idzi dzakadzvinyirirwa nzira, izvo zvakakonzera kushomeka kwakajeka kwemhasuru atrophy kunyangwe iyo sciatic nerve chikamu .
Chipimo chemushonga weUrolithins
Urolithins anotorwa kubva kune echisikirwo makomponi uye avo ekuwedzera anofungidzirwa kunge anoregererwa-akasununguka asina toxicities mutori wenhau. Nekudaro, zvakakosha kuti urambe uchifunga kuti izvi zvinosanganiswa zvichiri pasi pekutsvaga uye zvine miganho yemiyero iyo inofanirwa kutevedzwa zvakanyanya.
Mushure mekutsvagisa kwakawanda nezve mabhenefiti eUrolithin A, paive nezvakawanda zvidzidzo zvekutsvagisa zvakaitwa kuyera muyero wakakodzera weichi chemakemikari. Kubvisa, Kugaya, Metabolism, uye Kubvisa kudzidza kwakaitwa kuongorora maficha ekomboni.
Chidzidzo ichi chakakamurwa kuita maviri, zvichienderana nenhamba yemazuva, uye zvakaonekwa kuti 28-mazuva ekudzidza ne0, 0.175, 1.75, uye 5.0% yeUrolithin A yakavhenganiswa mukudya uye 90-mazuva kudzidza ne0, 1.25, 2.5, uye 5.0% Urolithin A yakavhenganiswa mukudya haina kuratidza shanduko mumakiriniki parameter, ropa kemesitiri, kana hematology, uye hazvina kureva chero nzira dzakasarudzika dzehupfu. Zvidzidzo zvese zviri zviviri zvaive nedosi yepamusoro yakaedzwa pa5% UA pahuremu mukudya izvo zvakatungamira kune madosi anotevera; 3451 mg / kg BW / zuva muvarume uye 3826 mg / kg BW / zuva mumadzimai mune 90-zuva remuromo kudzidza.
Zvakafanana naUrolithin A, Urolithin B yakadzidzwa zvakanyanya kuongorora muyero wakakwana. Kunyangwe zvichikosha kuti uzive kuti izvo zvidzidzo zvakanangana nemuyero wakachengeteka kuti uwane zvakakwana musuru kuwedzera. Iyi dose yakawanikwa iri 15uM, kune vese varume kana varume, zvisinei huremu.
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa zvakare, kunyanya nekuti chiri chepakati panguva yeUrolithin A kugadzirwa. Nekudaro, hapana kukwana kwakaringana kwakaitwa kuitira muyero wakakodzera kuti utariswe kune iyi chaiyo Urolithin.
Chikafu Sosi dzeUrolithins
MaUrolithin haawanikwe zvakasikwa mune chero chikafu sosi, zvisinei, iwo anowanikwa seellagitannins. Aya matanini anoputsika kuita ellagic acid, ayo anoenderera mberi achipinda muUrolithin A 8-Methyl ether, ndokuzopinda muUrolithin A, uye pakupedzisira, Urolithin B. Zvikafu zvakapfuma muUrolithins ndeizvi:
Zvibereko (mg / 100g nyowani uremu)
Sezvinoonekwa patafura, Cloudberries ndiwo muchero une Ellagitannins epamusoro uye Ellagic acid, ine Pomegranate sekondi yepedyo. Pomegranate Juice, zvisinei, iri sosi ine simba, kanenge katatu zvine simba seCloudberries.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti izvo zvemukati zveellagic acid mune zvekudya zviwanikwa hazvienzane neiyo yakaenzana urolithin mumuviri. Iyo bioavailability ye URolithins inoenderana zvakanyanya neguvhu microbiota yemunhu wese.
Nei Uchifanira Kutenga Kubva Kwedu Kugadzira Fekitori?
Urolithin Powder A uye Urolithin Powder B anowanikwa muhuwandu, kufekitori yedu yekugadzira iyo inosanganisa kugadzirwa, kutsvagisa, kusimudzira, uye kutengesa kwezvakadai zvinowedzera. Zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa uchishandisa yakanyanyisa kunyatso kutevedzera meseji yekuchengetedza, iyo inovimbisa mhando yepamusoro uye chengetedzo yechigadzirwa chekupedzisira. Zvese zvigadzirwa zvinotsvakurudzwa zvisati zvagadzirwa uye zvakanyatsoedzwa panguva uye mushure mekugadzirwa kuti usangane nemhando yako yemhando.
Mushure mekugadzirwa, zvigadzirwa zvinoedzwa kumarafu edu imwezve nguva yekutarisa mhando, potency, uye chengetedzo yeUrolithin mapoda nezvimwe zvigadzirwa. Kana yagadzirira kugoverwa, zvigadzirwa zvinorongedzwa uye zvinochengeterwa munzvimbo dzakakodzera, patembiricha chaiyo uku uchitevedza nhungamiro dzese kuti uve nechokwadi chekuti chigadzirwa chemhando yepamusoro chinosvika kwauri. Urolithin powders haina kuratidzwa kune chezuva panguva yekufambisa, kurongedza, kana kuchengetedza sezvo izvo zvinogona kukuvadza chigadzirwa chekupedzisira.
Kutenga Urolithin A poda uye Urolithin B poda kubva kugadziri fekitori yedu inovimbisa chigadzirwa chemhando yepamusoro pamitengo inodhura kwazvo.
Urolithin A (UA) inogadzirwa endogenous nemabhakitiriya emudumbu wemunhu akafumurwa kune chikafu chepolyphenolic makomisheni anosanganisira ellagic acid (EA) uye ellagitannins (ET), senge punicalagin. Aya ma polyphenolic precursors anowanikwa zvakanyanya mumichero (pomegranate uye mamwe majiroji) uye nzungu (walnuts uye pecans).
Urolithin inoshanda sei?
Urolithin A (UA) Iyo Gut Microbiome-Yakatorwa Compound ine Hutano Mabhenefiti eKuchembera uye Zvirwere. Zvigadzirwa zvakati wandei zvechikafu zvine yakasikwa polyphenols ellagitannins (ETs) uye ellagic acid (EA). ... Kana yangobatwa, UA inokanganisa hutano hwemitochondrial uye cellular mumamiriro ezvinhu ane zera nezvirwere.
Ndezvipi michero ine Urolithin A?
Kwayakawanikwa eellagitannins ndeaya: matamba, nzungu, mamwe mabriji (raspberries, mahabhurosi, mabheribheri, cloudberries), tii, muscadine mazambiringa, michero yakawanda yetropiki, uye waini-zera mawaini (tafura pazasi).
Chii chinonzi Urolithin chinoshandiswa?
The gut microbiota metabolizes ellagic acid zvichiita kuti pave nekugadzirwa kwebioactive urolithins A, B, C, uye D. Urolithin A (UA) ndiyo inonyanya kushanda uye inobudirira gut metabolite uye inoshanda sechinhu chine simba chinopesana nekuputika uye anti-oxidant agent.
Chii chinonzi Urolithin chakanakira?
Urolithin A inokonzera mitophagy uye inowedzera hupenyu muC. elegans uye inowedzera kushanda kwemhasuru mumakonzo.
Ndezvipi zvekudya zvine Urolithin A?
Zvokudya zveurolithin A
Kusvika ikozvino, tsvakurudzo yakawana kuti pomegranate, sitirobheri, mablackberries, camu-camu, walnuts, chestnuts, pistachios, pecans, brewed tea, uye oaken barrel-age waini nemweya zvine ellagic acid uye / kana ellagitannins.
Ndezvipi zvinobatsira zveUrolithin A?
Urolithin A (UA) chikafu chechisikigo, microflora-yakatorwa metabolite inoratidzwa kukurudzira mitophagy uye kuvandudza hutano hwemhasuru mumhuka dzekare uye mune preclinical mienzaniso yekuchembera.
Tinowana sei Urolithin A kubva mukudya kwedu?
Chii chinonzi Mitopure?
Mitopure is proprietary and very pure form of Urolithin A. Inobatsira miviri yedu kupikisa zera-inobatanidzwa cellular kuderera kuburikidza nekumutsidzira simba remagetsi mukati memasero edu; kureva mitochondria yedu. ... Urolithin A inovandudza mitochondrial uye tsandanyama basa, ichipa simba rakawanda kumaseru.
Mitopure yakachengeteka kudyiwa nevanhu here?
Mukuwedzera, muzvidzidzo zvekiriniki zvevanhu Mitopure yakatsunga kuve yakachengeteka. (Singh et al, 2017). Mitopure yakaongororwawo zvakanaka neUS Food and Drug Administration (FDA) ichitevera GRAS (inowanzo zivikanwa seyakachengeteka).
Ndinofanira kutora Mitopure riini?
Isu tinokurudzira kutora maviri Mitopure softgels pazuva kuti mhedzisiro mhedzisiro. Nepo iwe uchigona kutora Mitopure chero nguva yezuva, isu tinokurudzira kuitora nekudya kwemangwanani, sezvo iri iyo protocol yatakashandisa muyedzo yedu yekiriniki.
Chii chinonzi Urolithin chekuwedzera?
Urolithin A (UA) Iyo Gut Microbiome-Yakatorwa Compound ine Hutano Mabhenefiti eKuchembera uye Zvirwere. Zvigadzirwa zvakati wandei zvechikafu zvine yakasikwa polyphenols ellagitannins (ETs) uye ellagic acid (EA). Pakudyiwa kwezvokudya zvakadaro, ETs uye EA zvinogadziriswa muUA ne microflora mumatumbo makuru.
Urolithin A supplement inobatsira
Urolithin A inovandudza mitochondrial uye tsandanyama basa, ichipa simba rakawanda kumaseru. Iyo inongoitika-inoitika inorwisa-kuchembera komisheni inogona kubatsira chero munhu anotarisa kuti aite kuchengetedza hutano hwemhasuru.
Chii chinonzi Urolithin B?
Urobolin inowedzerwa inobva ku punica granatum (Pomegranate) iyo inofananidzwa neUrolithin B. Urobolin sekuwedzera inogona kuderedza kukuvadzwa kwemisungo kunowanikwa panguva yekurovedza kwakanyanya uye kudzivirira tsandanyama kubva kumatambudziko anokonzerwa nekudya kwemafuta akawanda.
Totiger TM, Srinivasan S, Jala VR, et al. Urolithin A, Novel Natural Compound kune Target PI3K / AKT / mTOR Nzira muPancreatic Cancer. Mol Kenza Ther. 2019; 18 (2): 301-311. doi: 10.1158 / 1535-7163.MCT-18-0464.
Guada M, Ganugula R, Vadhanam M, Ravi Kumar MNV. Urolithin A Mitigates Cisplatin-Yakakonzera Nephrotoxicity nekudzivirira Renal Kuzvimba uye Apoptosis mune Yeyedzo Rat Model. J Chemishonga Exp Ther. 2017; 363 (1): 58-65. doi: 10.1124 / jpet.117.242420.
Juan Carlos Espín, Mar Larrosa, María Teresa García-Conesa, Francisco Tomás-Barberán, "Biological Significance of Urolithins, the Gut Microbial Ellagic Acid-Derived Metabolites: The Evidence So Far", Uchapupu-Hwakagadziriswa uye Humwe Mushonga, vol. 2013, Chinyorwa ID 270418, 15 mapeji, 2013. https://doi.org/10.1155/2013/270418.
Lee G, Park JS, Lee EJ, Ahn JH, Kim HS. Anti-kuzvimba uye antioxidant nzira dzeurolithin B mune yakagadziriswa microglia. Phytomedicine. 2019; 55: 50-57. doi: 10.1016 / j.phymed.2018.06.032.
Han QA, Yan C, Wang L, Li G, Xu Y, Xia X. Urolithin A anodzivirira ox-LDL-indosed endothelial dysfunction pamwe nekugadzirisa microRNA-27 uye ERK / PPAR-γ nzira. Mol Nutriti Chikafu Res. 2016; 60 (9): 1933-1943. doi: 10.1002 / mnfr.201500827.